Waan jeclahay ArchLinux laakiin .... | Laga soo bilaabo Linux
Waan jeclahay ArchLinux laakiin….
Sida inbadan oo idinka mid ahi ogtahay, waan isticmaali jiray archlinux waxaanan u malaynayaa inay tahay waqtigii aan natiijo dhakhso ah uga soo qaadan lahaa waayo-aragnimadayda muddadan.
Qaab kooban waxaan ku soo bandhigi doonaa wanaagga iyo xumaanta aan ku arko Qaybintaan.
1.1 Sii deynta
1.5 Dhunkasho dhunkasho .. (KISS)
Waa run in haysashada qaybinta noocan ah ay faa'iido badan leedahay. Maaha inaynu ka warqabno bilowga 6dii biloodba mar (sida kiiska Ubuntu) waana ku raaxeysan karnaa noocyada ugu dambeeya ee xirmooyinka marka ay soo baxayaan. Taasi waa nooca 'versionitis' waa dhiirrigelin weyn.
Haddii ay jiraan wax wanaagsan oo ku saabsan qaybinta this, waa in ay kugu qasbeyso inaad wax barato. Isticmaalkeeda maalinlaha ah waxaad u fahmeysaa sida ay u shaqeeyaan waxyaabo ka hor intaadan qiyaasin sida ay u shaqeynayeen. Taasi ma xiiseyneyso isticmaale caadi ah, laakiin waan jeclahay.
Mawduuca ah Conocimiento Waxaan ku darayaa tan. Ugu fiican -Leaks in hadda ka jira Bulshada GNU / Linux ayaa leh halka. Wixii aad halkaas ka hesho waa isku mid Debian maxaa loogu Fedora. Kaliya waa inaad raadisaa oo aad wax yar akhridaa.
Waxa aan ku jirin AUR? Waxaan u maleynayaa inaad xitaa heli karto sanduuq dadka dhintay hadaad rabto. Nidaamka aad isticmaasho (oo la mid ah Ports de bilaash) waa wax weyn.
Dhunkasho dhunkasho .. (KISS)
Qodob kale oo lagu daray. Inkasta oo qaarna si kale u maleeyaan, isku hagaaji archlinux sidaa uma dhib badna. Wax walba waxay ku yaalliin meel cayiman, iyadoo la raacayo amar macquul ah. Waxaan jeclahay inaan awood u yeesho inaan wax ku dhiso cabirkeyga, wixii aanan u baahnayn wax badan.
Waa in la ogaadaa in dhibaatada ugu weyn ee leh archlinux Maaha sababta qaybinta lafteeda, laakiin sababtoo ah xaddidaadaha shaqsiyan aan u leeyahay xiriir iyo helitaan Internet. Waxaa jira xirmooyin badan oo laga helo AUR (Turpial, Marlin .. iwm) oo sidaas darteed aniga ahaan iyagu lama geli karo.
Sidoo kale ma lahan waxqabad aad u wanaagsan marka loo eego Debian. Bannaanka tan ma haysto cabashooyin kale illaa hadda. Waan sii wadi doonaa isticmaalka halka ilaa casharrada laga dhammaystirayo Rakibaadda Xfce, ka dibna waad ku noqon kartaa Tijaabada Debian. 😀
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Waan jeclahay ArchLinux laakiin….
Waad iga yaabisay ka tagida xubuntu, debian iyo reexaanta.
Waa hagaag, ha ka waaban, dhibaatada leh elav waa isku xirnaanta, wax intaa ka badan ma jiraan
Eh qashin waxaan dhihi geesinimo, sidee ku sameyneysaa hagaha kde?
Marka hore waa inay iga tagaan, iyo nidaamka aasaasiga ah ee aan isticmaali karo anigoo ku xiraya elav, markaa waan iska ilaaliyaa dib u rakibida maxaa yeelay Virtualbox ayaa isiiya dhibaatooyin
Dhibaatooyin noocee ah ayuu ku siiyaa? Si sax ah ma u aqrisay wiki-ga? maxaa yeelay waxaan ku rakibey gnome 3 feybalka oo aan dhibaato lahayn.
Waa qalad in midda bacaadka ah ay ku jirto boosta oo uu ii soo diray si aan u xajiyo, si aan u arko haddii aan isaga raadiyo oo aan kuu sheego
Eh habka aad u aragtid ma waxaan kuugu yeeray kore, "Qashin waxaan ula jeedaa Geesinimo" ma indhoole ayaad tahay mise?
Waa taan kaaga baxay sida shit hahaha
Shakigu waa isla isla, waxaan leeyahay isku xirnaan internet ah oo dhan 128k, ma qiyaasi kartid nolosha murugada leh ee aan haysto
Sideed u dooneysaa inaad ku guuleysato bakhtiyaanasiibka haddii aadan ciyaarin? Waxba iskuma dayin inaan waxba la helin
fredy Waxaan kuu sheegi karaa in AUR ficil ahaan ay lamid tahay adeegsiga xudunta, dheeriga ah ama bulshada dhexdeeda, runti aur waxay isticmaashaa qoraal soo degsada ilaha kuna soo uruuriya qaanso, ficil ahaan waxay la mid ahayd isticmaalka repos kale Si sax ah uma fahmin dhibaatada Elav, laga yaabee inaan isku dhiibo kabihiisa si aan u fahmo, hadii uusan dhibaato kala kulmin keydka rasmiga ah, aragti ahaan waa inuusan dhibaato ku qabin Arch User Repository.
Haddii ay sabab u tahay xawaaraha isku xirka hooseeya, waa wax saameynaya wax walboo disto ah, maxaa yeelay kuwa kale wali waa inaad kala soo degsataa cusbooneysiinta iyo goorta aan ahayn, markaa iso. Kaliya in qaanso arke in badan ayaa la arkaa, laakiin waa wax laga yaabo in marin habaabin.
Taasi waa halka ay dhibaatadaydu ku jirto, inay tahay inay kala soo baxdo ilaha meelo kala duwan oo aanan marin u helin.
Waa hagaag in kasta oo ay jiraan baakado badan oo aanan shaki ka qabin inay faa'iido leeyihiin, maahan in loo baahan yahay inay helaan OS dhammaystiran, dhab ahaantii waxaan haystaa illaa 14 oo aan gebi ahaanba daruuri u ahayn howlaha saxda ah ee nidaamkayga, (leh pacman -Qm waan hagaajiyay waa inaan tirtiraa wax yar oo aanan isticmaalin: D)
Waayahay, waa lay qancay, waxaan fadhiyay Ubuntu sanado waana waqtigii isbedelka, markaan guuleysto waan faalloon doonaa.
Waxaan rakibayay Arch, laakiin waxay umuuqataa inaan khalad ku rakibey: S
Ku rakib Slackware, walina waan isticmaalayaa. Waan jeclahay Slack wax badana waan bartay. Waan ogahay inay aad u adag tahay, laakiin muhiimada ayaa ah in la helo aqoon. =)
waxay u egtahay inay ku rakibayso khalad
Oo maxaa kugu dhacay? Isla waa wax aan ogahay oo aan ku caawin karo (haa elva, waan ka xumahay elav mase ka hinaaso dabcan hahaha)
Waxaan u maleynayaa inay ahayd wax ku saabsan sawirada, maadaama aanan rabin inaan rakibo KDE waana inaan rakibo Xfce ... Waxayna u muuqatay mid laga naxo. Laakiin mid ka mid ah maalmahan, waxaan ku soo noqday shaqadaydii oo waxaan isku dayay inaan rakibo. Waxaan u xiisi doonaa Slacky-ga inkasta oo: C
Ma rakibtay sawirada? Laakiin dhinaca kale waxay ila egtahay sida jinniyo aniga, gaar ahaan dbus-ka aadan ku darin.
KDE? Hadaad ii ogolaato, waxaan halkaan ku dhigi karaa hage lagu rakibo Arch Linux oo leh KDE halkaasna qof walba ha uga tago shaki kasta oo uu doonayo
Hagaag, hadaad rabto, samee soo gal talaabo talaabo talaabo ah ... Waxaan ubaahanahay XD
Hagaag, hadaad rakibto sawirada.
Hagaag horey u soco, waxaad koonto ku leedahay halkan iyo wax walboo ... waxaad bilaabeysaa inaad sameyso waana intaas, markii aad dhameysato waxaad igu ogeysiineysaa emayl si aan u ansixiyo boostada
Arch waa wax weyn in la barto, wiki waa wax cajiib ah… Waxaan la joogay Arch ilaa 1 sano. Marnaba kuma fikirin inay xasillooni yeelaneyso wax walba oo hadda jira.
Maxaad leedahay waa xun yahay ... oo haa, waxaan ku tiirsannahay xiriir wanaagsan oo internetka ah, laakiin ... kee baa distoorku u baahnayn?
Waa wax laga xishoodo dhibaatooyinka isku xidhka, in kasta oo idinka iyo bacaadka iyo dadka kaleba ay dayactiri karaan bakhaar maxalli ah oo la mid ah AUR. In kasta oo ay iska cadahay inay u baahan tahay shaqo joogto ah si loo helo loona ilaaliyo ilaha wararka loona sii daayo tar.xz ilaa pkg.tar.xz, sida iska cad baakadaha aad u aragto inay lagama maarmaanka u yihiin.
In kasta oo aan wax kuu sheego, Elav oo isticmaalaya reeraha 'AUR repos' waxay la mid ahayd adeegsiga xudunta, bulshada, dheeriga ah markay tahay isku xirnaanta.
Xaqiiqdii ma isticmaalo AURs gabi ahaanba, codsiyada aan ka helo AURs si fudud uma baahni, ama ma aha kuwo deg deg ah 😀
Rakibaadda Arch waxay iila muuqataa dhibaato.
Haddii aad khalad samayso xulashada xirmooyinka isku dhaca, oo ay jiraan boqolaal iyaga ka mid ah, KISS ma kuu oggolaanayso inaad si fudud u hagaajiso qaska. Taasi waa, haddii aad iga dhigto aniga xitaa way ka fiican tahay LMDE.
Hadda waxaan la socdaa rakibidda Chakra oo gaar ah, tan ugu fiican fekerkeyga dhan, laakiin ma leh AUR, tusaale ahaan freeciv waa dhib - marka loo eego rakibidda ubuntu, LMDE, Sabayon ama SUse oo aan ka mid ahaa wixii aan isku dayay. .
Waxaan ka fekerayaa inaan ku beddelo chakra Kahel, oo aan u maleynayo inay gebi ahaanba tahay ARCH iyo sidoo kale KISS rakibaadda maxaa yeelay waxaan rakibi karaa dhowr GDM, Gnome / XFCE / KDE. waxaana heli doonaa marinka PPA-yada.
Caqabad: xirmo loogu talagalay Multisystem inay ka shaqeeyaan Arch, waa waxa aan u adeegsado inaan ku tijaabiyo distros, oo kaliya waxay si fiican uga shaqeysaa Ubuntu - Waxaan u maleynayaa Mint 12 sidoo kale - LMDE tan iyo markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay ma ii ogolaato inaan sameeyo , laakiin aniga ayay ii shaqaysaa
Uhm, ma jiraan wax aad ku sameysid pacman oo aadan tirtiri karin, illaa aad ka buuxiso nidaamkaaga in badan oo xitaa qunsuliyada aysan ku xareyn doonin. Aniguna mar labaad waxaan idhaahdaa raacida talaabooyinka wiki ma jiraan wax khasaaro ah oo la rakibo.
Haddii aanan khaldamin, Nidaamyada kala duwan ayaa ku jira AUR: https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=33187
Ku jawaab kagan
MMM waxay ila tahay jiritaanku inuu dhib badanyahay.
Arch waa wax aad u fudud aniga, oo leh aqoon aasaasi ah.
Si fudud u raac Wiki (Ingiriisi) talaabo talaabo ah.
Waxaan u isticmaalaa Arch + Gnome 3, luul.
Archero badan, si loo arko haddii ay hagaajinayaan wakiilkaaga isticmaale.
Hagaag, waxaan si sax ah ugu socdaa jihada ka soo horjeedka: D. Waxaan ka imid Arch mudo gaaban waana kugu raacsanahay waxaad sheegto xumaan iyo samaanba. Waxaan isku dayay distros kale sida Mint (Waan jeclahay), Ubuntu, Fedora, openSUSE ... laakiin markii aan lahaa Ubuntu waxaan idhi: "Hagaag, wax walbana waan fuulay wax walbana waa la qabtay, way fiicantahay oo kee iyo kee ... iyo?" . Waxaan raadinayey wax igu qasbi lahaa inaan barto xitaa iyadoo ah laylis iyo isticmaale Linux caadi ah. Waxaan la kulmay Arch waana jeclahay. Hadda waxaan ogaaday in Debian uu leeyahay nalkeeda ama superlight-keeda oo aan rakibo si aan wax badan uga barto sidoo kale, anigoo raacaya falsafada Arch.Waxaan u maleynayaa inaad horeyba u taqaanay Archbang (Arch + Openbox) sida aan sidoo kale u helay CrunchBang (Debian + Openbox) . Xitaa waxaan tijaabiyaa Crux (halka uu Arch ku saleysnaa). Sikastaba xaalku ha ahaadee, ku soo dhawow Arch, anigu gebi ahaanba maan tegin, laakiin waxaan si buuxda ugu waafaqsanahay waxaad leedahay, wanaag iyo xumaanba. Aniga ahaan, qaybin aad u weyn oo aan jeclaan lahaa inaan horay u soo ogaado.